Danab Iyo Dabaylo Waxyeelo U Gaystay Saldhiga Dhexe Ee Booliska Boorama Iyo Khayriyadii Magaalada | Salaan Media
Danab Iyo Dabaylo Waxyeelo U Gaystay Saldhiga Dhexe Ee Booliska Boorama Iyo Khayriyadii Magaalada
Danab ku dhacay qolka maxaabiista ee Saldhiga dhexe ee Booliska ee Boorama ayaa dhaawac u gaystay 2 maxbuus oo ka mid ah maxaabiista ku xidhnayd saldhiga, sidan waxa saxaafada u xaqiijiyay taliyaha Taraafikada Gobolka Awdal Mud. Axmed Daahir oo khadka taleefakna kula soo xidhiidhay shabakada.
Taliye Axmed Daahir ayaa waxa uu yidhi “ Roob xoogan oo onkod ilaac, iyo dabayl wata ayaa nagu da’ay galabta, roobkaas ayaa waxa uu sababay qasaare fudud kadib markii uu danab ku dhacay qolkii maxaabiista ee Saldhiga dhexe ee Booliska oo ay ku xidhnaayeen maxaabiis door ah, waxa ku dhaawacmay 2 maxbuus oo uu saagaadhay dhaawac meel dhexaad ah.
Sidoo kale taliyahu waxa isaga oo hadalka sii wata uu yidhi “ Roobkan waxa uu watay dabayl xoogan, waxa uu jiingadii gabi ahaanba ka qaaday khayriyadii Boorama, sidoo kale waxa uu dumiyay barande kale oo gudaha saldhiga ku yaalay oo cadceeda laga hoos gali jiray, ilaa imika waa intaas qasaaraha uu gaystay roobkaasi”
Roobabkan xoogan ayaa ka da’ay Boorama galabta galinkii dambe iyaga oo ay roobabkaasi wateen dabaylo xoogan oo ay dheer tahay danab onod iyo hilaac badan leh.
Dhawr maalmood ka hor ayay ahayd markii danab hal qof ku dilay degaanka Shabeeley ee duleedka Boorama, qofkalana uu ku dhaawacmay